Dowladda Soomaaliya oo samaysanaysa Maraakiib ilaalisa xeebaha dalka (Sawirro)
Posted on July 17, 2016RBC, Wararka
Muqdisho (RBC Radio) Dowladda Soomaaliya ayaa muddo ku dhow soddon sanno kaddib samaysanaysa Maraakiib ilaalisa xeebaha dalka,iyada oo hadda ay socoto samaynta tiradii ugu horraysay oo gaaraysa illaa lix markab oo ah kuwa loogu tala galay ilaalada xeebaha.
Safiirka Soomaaliya u fadhiya Midowga Yurub,Dr Cali Sa’id Faqi oo booqanaayey goobta lagu diyaarinaayo Maraakiibta ,ayaa waxaa uu sheegay in ay guul taariikh ah u tahay Soomaaliya in loo sameeyo Maraakiib ilaalisa xeebaha dalka kana ilaalisa wax walbo oo halis ku ah Soomaaliya ee ka yimaada dhanka badda.
Danjire Cali Faqi ayaa waxaa uu sheegay in haddii lagu guuleysto sameynta Marakiibtaan oo hadda howsheeda ay socoto in ay ammaanka xeebaha wax ka qaban dooonaan sida burcadbadeedka argigixisada kuwa hubka sharcidarada soogalinaya dalka iyo waliba kuwa kalluumeysiga sharcidarada ah ka wada biyaha Soomaaliya .
Waxaa kalo uu sheegay safiirka,sida ay baahisay wakaalada wararka SONNA iyo talefishinka qaranka in heshiiska dhexmaray dowladda Soomaaliya iyo Shirkadda (Atlantic marine offshore) ee fadhigeedu yahay wadanka Holland uu jiro in la tababaraayo ciidamadii Marakiibta ku shaqeynlahaa oo tabarkoodana uu qaadan doono muddo ku siman 5 illaa 7 sano kadibana ay la wareegaan howlaha Maraakiibtaasi.
Dowladda Soomaaliya ayaa heshiiis la gashay shirkada hadda ku howlan samaynta Maraakiibtaan taas oo la yiraahdo Atlantic marine offshore 28 bihii Julay 2013, heshiiska Maraakiibtaan Soomaaliya loogu sameeyo, waxaana Somaaliya u saxiixay Wasiir kii Hore ee Gaashaandhiga Abdihakim Mohamoud Haji-Faqi.